छोप्‍न खोजेका विषय उघारिँदै गए- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुर्‍याल संगीत, साहित्यका पारखी हुन् । नारायणगोपालले गाएको ‘तिमीले भनेका सारा देव छोएर’ गीतका गीतकार प्याकुर्‍यालको आत्मकथा ‘आफैंलाई खोज्दा’ हालै प्रकाशित छ ।
माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका अर्थशास्त्रका पीएचडी प्याकुर्‍यालका यसअघि अर्थशास्त्रलगायतका विषयमा १३ पुस्तक प्रकाशित छन् । उनीसँग गरिएको किताब वार्ता–
तपाईंका विचारमा पढ्नु के–का लागि होला ?
पढ्न एकाग्रताको आवश्यकता पर्छ । लेख–पुस्तक लेख्न, विचार तिखार्न अध्ययनले मद्दत गर्छ । अध्ययनले आत्मविश्वास बढाउँछ, तर्क, संवाद गर्ने ताकत दिन्छ ।
हालसालै पढेको हृदयस्पर्शी कुनै किताब ?
किताब पुरानै हुन् तर ती मैले लकडाउनमा पढें । जेम्स ए. डोर्न र बरुण यस. मित्राले सम्पादन गरेको ‘पिटर बउर एन्ड द इकोनोमिक्स अफ प्रस्पेरिटी’ र सन् २०१९ मा प्रकाशित पल मेसनलिखित ‘क्लियर ब्राइट फ्युचर– अ र्‍याडिकल डिफेन्स अफ द ह्युमन बिइङ’ पढिरहेको छु ।
तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकार पनि हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा लेखिएका असाध्यै मन परेका किताब पाठकलाई सिफारिस गर्नुस् न !
यस्ता किताब अनगिन्ति छन् । तर, मलाई साह्रै मन परेको र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रुचि राख्ने विद्यार्थीले वालेस थिजको ‘ह्वेन गभरमेन्ट्स कोलाइड’ अनि थमस सेलिङको ‘द स्ट्राटेजी अफ कन्फ्लिक्ट’ पढ्दा राम्रै ज्ञान हासिल होला ।
मन परेका किताबलाई के गर्नुहुन्छ ? देखिने ठाउँमा सजाउनुहुन्छ या सिरानीछेउ राख्नुहुन्छ ?
मन परेका किताब देखिने ठाउँमा सगर्व सजाएर राख्छु । तर, समयअनुसार र प्राथमिकताअनुसार सजाउने स्थान र पुस्तक भने परिवर्तन भइराख्छन् ।
नेपाली साहित्यमा प्रकाशित पछिल्ला आख्यान/ गैरआख्यान/ आत्मकथा कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समय प्राविधिक कारणले अर्थशास्त्रका भन्दा अन्य पुस्तक पढ्ने समय खासै मिलेको छैन । तर, पढेका केही किताबमा ‘अन्तर्मनको यात्रा’, ‘पल्पसा क्याफे’, ‘मेरो समय’, ‘खुशी’, ‘महको म’, ‘नथिया’ मन पर्छन् ।
तपाईंले पढेका सामाजिक–राजनीतिक किताबमध्ये पाठकलाई कस्ता किताब रिफर गर्न चाहनुहुन्छ ?
मैले स्नातकोत्तर तहमा प्राध्यापन गरेको थोर्सटिन भेबलिनको ‘द थिअरी अफ् लिजर क्लास’ रिफर गर्न चाहन्छु । यो सामाजिक–राजनीतिक व्यङ्ग्यको अनुपम उदाहरण हो ।
नेपालीमा कस्ता किताब लेखिएका छैनन् ? कस्ता लेखिनुपर्छ ?
अन्य विधामा नबोलूँ किनभने मेरो अध्ययन पुगेको छैन । तर, अर्थशास्त्रमा बोल्न सक्छु । महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेका केही उल्लेखनीय किताबबाहेक नेपालमा हिस्टोरिकल इकोनोमिस्ट नै छैनन् । र, यसको महत्त्व हामी धेरैले बुझेकै छैनौं । यसअलावा इन्स्टिट्युसनल अर्थशास्त्रमा किताब पनि अभाव छन् ।
नेपाली समाज र इतिहासमाथि लेखिएका किताबका कमजोर पक्ष के होलान् ?
समाज र इतिहासका विषयमा लेखिएका धेरैजसो किताब राम्रै लाग्छन् । कमजोर पक्ष केलाउनतिर नलागौं । बरु मलाई लाग्छ– सूचनाको उपलब्धताको जटिलताले लेखक अन्योलमा पर्नु स्वाभाविकै हो ।
पढ्नु तपाईंका लागि के हो ? आनन्द, बाध्यता कि ज्ञानको अभीप्सा ?
यो जीवनमा परीक्षा दिनुपर्ने दिन अब सकिएकाले किताब पढ्नु मेरा लागि आनन्द र ज्ञानको अभीप्सा हो । बाध्यता कदापि होइन ।
स्कुल–क्याम्पसमा पढेका कस्ता किताब जीवनमा उपयोगी भए ?
स्कूले जीवनमा हाम्रा पुस्तकालय भनेकै शिक्षक हुन्थे । हाम्रो समयमा जे पढे पनि कोर्समा भएका ओरिजिनल किताब नै हुन्थे । स्कूल–क्याम्पसमा पढेका किताब सैद्धान्तिक ज्ञानका लागि अहिलेसम्मै उपयोगी छन् ।
घरमा तपाईंसँग कति किताब छन् ? तीमध्ये प्रिय पाँचको लिस्ट बनाउनुस् न !
घरमा, कौसीमा, थिङ्क ट्यांक कार्यालयको मेरो कोठामा, नेपाल अर्थिक संघको कार्यकक्षमा गरी हजारौं किताब छन् । तीमध्ये यीचाहिँ प्रिय हुन् भनेर लिस्ट बनाउनु सम्भव छैन । पाँच प्रिय किताबको सूची तयार पार्ने विषय साना छोरा–छोरीलाई बा र आमामध्ये को प्रिय भनेर जिस्क्याउनुजस्तो सजिलो होइन ।
तपाईंको आत्मकथा ‘आफैंलाई खोज्दा’ को कभरमै लेखिएको छ– ‘केही छोपिएका, केही उघारिएका’ । ‘छोपिएका’ विषय उघार्नुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ?
यो मैले आफैंलाई खोज्दाको कथा हो– जीवनभरका सुख–दुःखको संकलन । आफ्ना भोगाइलाई आफैंसँग किरिया खाएर जस्ताको तस्तै लेखेको छु । लेखक पनि स्वयं, पात्र पनि आफैं । कतिपय विषय भन्न सकिन्न । त्यसैले लाग्यो– लेख्ने आँट गर्नुपर्छ ।
लेख्दै गएँ, छोप्न खोजेका विषय उघारिँदै गए, उघार्न खोजेका विषय पनि आवश्यकताभन्दा बढी उघारिए । यो कुरा मैले किताबको ‘आरम्भ’ मा पनि लेखेको छु ।